Xog gaara oo ay heleyso Wakaalada Warqaad.com ayaa sheegeysa in Madxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu diiday inuu faragalin ku yeesho Mooshinka laga keenay Madaxweynaha Soomaaliya.
Ra’iisal wasaarihii hore Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde), Guddoomiyaha Guddiga Dib u heshiisiinta Cali Mahdi Maxamed, Senator Muuse Suudi Yalaxow iyo Masuuliyiin kale ayaa la kulmay Ex-Madaxweyne Xasan Sheekh iyagoona doonaya inuu door ka qaato xaln u raadinta Xiisada taagan oo hadii ay sii xumaato laga yaabo in Dalka uu galo xaalad adag.
Xasan Sheekh oo guddoominaya Xisbi Mucaarad ah oo ay ku midoobeen Xisbiyada ugu waa weyn ayaa doonaya in Mooshinka laga keenay Farmaajo Baarlamaanka la horgeeyo, waxaana xubno ka tirsan Xisbigiisa ay door weyn ka ciyaarayaan mooshinkaasi siduu u meel mari lahaa.
Nuur Cadde iyo Cali Mahdi ayaa dadaal ugu jira sidii Culeyska siyaasadeed ee la saaray Madaxweyne Farmaajo looga ridi lahaa, iyagoo Xildhibaano iyo Siyaasiyiin badan la kulmay sidii xal loogu heli lahaa arrintan.
Maamulka Ceerigaabo oo diiday xaaladda deg degga ah ee uu Muusi biixi geliyay Sanaag